Tag: Maka Schaefer
Vakanaka, Vakuru, uye Vanotyisa neArtificial Intelligence
China, May 11, 2017 China, May 11, 2017 Douglas Karr
Pandakaburitswa zvine rukudzo kubva kuNavy muna 1992, yaive nguva yakakwana. Ndakaenda kunoshandira Virginian-Pilot muNorfolk, Virginia - kambani yakagamuchira zvizere IT Innovation sechikamu chemazano ayo epakati. Isu takaisa fiber uye tikabvisa mutsara-we-saiti setiraiti, isu takaomarara-wired programmable-logic macontroller kumaPC uye takatora data rakatibatsira kunyatsogadzirisa kuchengetedza kwedu kuburikidza neIntranet, uye kambani yemubereki, Landmark Communications, yanga ichitoisa mari zvakanyanya mu kuwana mapepanhau
Kujeka Kunorwisa Buzzwordsmithiness Pane Kubata
China, December 22, 2016 China, December 22, 2016 Douglas Karr
Shamwari yangu yakanaka kwemakore mazhinji Steve Woodruff, anozvizivisa (uye ane tarenda kwazvo) Clarity Consultant, anoenderera mberi nekugovana zvimwe zvisina musoro zvekushambadzira-taura pakati pemawebhusaiti uye enhau enhau. Akagovana yake yenguva-yose yaanofarira neni kubva makore akati wandei apfuura: Isu takapayona yemhando nyowani yekusimudzira, inotungamirwa nevatengi inowirirana zvichibva pamisimboti yeakaomarara adaptive masisitimu. Aya ndiwo marongero matsva ezano renyika iri kuchinja shanduko:
Kuonekwa uye Mibairo kuburikidza neKukurudzira
Chipiri, Kurume 27, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Tinokukwazisai kushamwari yedu, Mark Schaefer, uyo akabvunzurudzwa nguva pfupi yadarika paCBS nezvebhuku rake idzva, Return On Influence: The Revolutionary Power of Klout, Social Scoring, and Influence Marketing. Takaita hurukuro inoshamisa naMark Schaefer mavhiki mashoma apfuura pane yedu redhiyo show. Imwe yekiyi mubvunzurudzo yandinonyatsokoshesa kurudziro yaMark yekuti vezvenhau vanopa chero munhu mukana wekuonekwa uye kuwana mibairo zvichibva